Maxaad Kala Socotaa 10-Wargeys Ee Loogu Akhriska Badan Yahay Adduunka? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxaad Kala Socotaa 10-Wargeys Ee Loogu Akhriska Badan Yahay Adduunka?
Maxaad Kala Socotaa 10-Wargeys Ee Loogu Akhriska Badan Yahay Adduunka?
Qof Akhrisanaya Wargeyska The Guardian Ee Kasoo baxa UK
Bulshooyin badan oo caalamka ayaa ku hormaray akhrinta iyo joogteenta Jariirradaha ama wargeysyada dhulkooda kasoo baxa, ama kuwa caalamiga ah ee dalalka iskugu goosha.
Wargeysyada la akhriyo waxaa ay iskugu jiraan kuwa maalin-layaal, todobaadlayaal ah, kuwa billayaal ah iyo kuwa kale oo sannad kasta mar soo baxa, dhammaantooda waxa ay soo gudbiyaan macluumaad iyo xogo ay isleeyihiin baahi badan ayeey u qabaan dadka ku xeeran.
Jariirradaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara nolosha maalinlaha ah, haddaba maanta waxa aan idin soo gudbin doonaa 10-ka wargeys ee loogu akhriska badan yahay adduunkan aynu dulsaarannahay.
1. The Guardian (UK)
Horaantii waxaa la oran jiray The Manchester Guardian, wargeyskan waxaa la aas aasay sannadkii 1821-kii, waxaana dhidibbada u taagay koox ganacsato ah oo uu madax u ahaa John Edward Taylor, halkudhigga guud ee wargeyskan wuxuu ahaa “Comment is Free, but Facts are sacred,” oo micno ahaan noqoneysa “Aragtidu waa xor, balse xaqiiqda waa muqaddas” oo lagala jeedo qof walba aragtidiisa ayuu xor u yahay, hasa yeeshee in xaqiiqda la tebiyo ayaa ah wax waajib muqaddas ah, taas oo illaa hadda ay astaan ama halkudhig ahaan u adeegsadaan.
2. The Wall Street Journal (USA)
1882-kii, iskaashigii Charles Henry, Dow Jones ayaa lagu yagleelay wargeyskan kamid ah kuwa loogu akhriska badan yahay adduunka marka la fiiriyo dadka ku xiran.
1940-aadkii, balaarintii warshadaha Mareykan ka ayuu qayb wayn ka qaatay, waxaana lagu tiriyaa wargeysyada taageerada u muujiyay dawladda USA kaddib iyo kahor ba dagaalkii labaad ee adduunka.
3. The New York Times (USA)
1851-ayaa la go’aansaday in la sameeyo joornaalka caanka ah ee Newyork Times, kaas oo kamid ah kuwa loogu xigashada badan yahay adduunkan aynu hadda ku nool nahay, waxaana ku qoran qaybta bidix ee bogga hore ee Joornaalkaas qoraal ah “All The News That’s Fit to Print”, oo u dhiganta “Dhammaan wararkan waa kuwii u qalmay in la daabaco”, ama ” Dhammaan Warar u qalma in la daabaco” taas oo ay ku xoojinayaan tayada iyo sugnaanta wararka ay qaataan.
Waxaa lagu qoraa warar iskugu jira siyaasad, cayaaro, madaddaalo, Muusig iyo waxyaabaha lamidka ah, dunida oo idil ayaa u diyaar garoowda in ay akhrisato joornaalkan marka uu soo baxo.
4. The Washington Post (USA)
Warsidaha ugu balaaran uguna da’da wayn ee kasoo baxa magaalada Washington DC, waxaana aas aasay sannadkii 1877-kii ganacsadihii caanka ahaa ee Stilson Hutchins, kaas oo ugu talagalay in uu noqdo mid kamid ah wargeysyada ugu muhiimsan ee magaaladiisa kasoo baxa; hasa yeeshee rejadiisa waxa ay noqotay mid rumowday kaddib markii wargeyskii uu aas aasay noqday mid kamid ah kuwa loogu akhriska badan yahay dunidan casriga ah.
5. China Daily (China)
June 1, 1981-kii ayeey ahayd markii ugu horreysay ee wargeys afka Englishka ah ku qoran uu kasoo baxo magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha.
Sidoo kale magaca loo yaqaano waa “Window To Chine” oo u dhiganta “Fursaddii ama Daaqaddii Shiinaha”maadaama dadka Shiinaha ah ay fursad ugu noqotay in ay helaan wargeys ku hadla afka Englishka ah kaas oo kasoo baxa dalkaas.
Dalka oo idil ayaa lagu balaariyay Joornaalkaas, waxaana uu kamid yahay kuwa loogu akhriska badan yahay adduunka, marka la fiiriyo kala sareyn dhawaan lasoo saaray.
6. The Times of India (India)
Waa mid kamid ah wargeysyada wareega kuwooda ugu badan ee la akhristo; November 3, 1838-kii ayeey ahayd markii la aas aasay waregeyskan, waxaana magaciisa hore uu ahaa “The Bombay Times and Journal of Commerce”, kaas oo mar dambe isku baddalay The Times Of India oo loo soo gaabiyo (TOI).
Tira badnida dadka Hindi iyo akhris jaceylka dadkaas lagu daray qoraallada qurxoon ee soo jiidashada leh ee ay qoraan qalin-maalayaasha Jariirraddan ayaa ka dhigeysa in ay si heer sare ah ula falgasho dadka ku dhaqan dalka India iyo nawaaxigiisa.
7. The Sydney Morning Herald (Australia)
1831-kii ayeey ahayd markii la aas aasay wargeyskan oo markiisii hore ahaa Sydney Herald, waxaana yagleelay aqoonyahannadii Ingiriiska ahaa ee Alfred Ward Stephens, Frederick Stokes iyo William McGarvie oo dhammaan ka shaqeynayay Sydney Gazette oo ahayd joornaal kale oo kasoo baxayay xilligaas magaalada Sydney ee dalka Australia.
8. The Asahi Shimbun (Japan)
Waa mid kamid ah joornaallada kusoo baxa luuqadda Af Japaniska kuwooda ugu waa wayn, sidoo kale wargeysyadii hore wuxuu dheer yahay waa mid dawli ah oo qaranka Japan ayaa iskaleh oo uu afkooda ku hadlaa.
25 January 1879-kii ayeey ahayd markii ugu horreysay ee la daabaco joornaalkan, waxaana xusuus mudan in afar bog oo qura lagu bilaabay daabacadda Joornaalkan.
9. Dawn (Pakistan)
Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah oo ahaa muwaaddin u dhashay dalkii la isku oran jiray Hindustaan (Hindiya, Pakistan, Bangaledesh, Napel IWM) islamarkaana degnaa Delhi India ayaa yagleelay waregeyskan, kol ay taariikhdu ku beegneyd 26 October 1941-kii.
DAWN, waa Joornaalka ugu duqsan, uguna caansan dhanka wargeysyada Afka Ingriiska kusoo baxa, waxana markii hore lagu daabacay magaca Latifi Press, ugu dambeynse waxa ay isku biyo shubatay magaca DAWN.
10. Zaman (Turkey)
1986-kii ayeey dunida kusoo biirtay Jariirraddan caanka ah ee Zaman, balse sannadkii 1995-kii ayeey noqotay wargeyskii ugu horreeyay oo Turki ah islamarkaana Online ahaan u diiwaan gashan.
Dhawaan markii uu dhacay sannadkii lasoo dhaafay isku daygii Afgembi ee lagu doonayay in jagada lagaga tuuro madaxwaynaha dalkaas mudane Recep Teyyip Erdogan, waxaa lagu eedeeyay in ay gacan saar la leedahay wadaad diimmeedka mucaaradka ah ee Fethullah Gülen, balse ugu dambeyn waxa ay iska fogeeyeen ku lugyeelashada dhacdadaas.
Marka si kooban looga hadlo arrinta wargeyskan, waxa ay noqoneysaa in ay tahay mid kamid ah warsidayaasha ugu saameynta iyo loogu akhriska badan yahay dalka Turkiga.
Si kastaba ha ahaatee, qoraalkan uguma tallagalin in aan kaga hadalno keliya kala sareynta joornaallada loogu akhriska badan yahay adduunka, balse waxa ay tahay in uu su’aal iska wayddiiyo qof walba oo akhrista qoraalkannaga imisa joornaal ayaa kasoo baxda Soomaaliya?, keebaa ugu akhriska badan? Maxaase lagu qoraa Joornaalladaas?; haddii aan su’aalahaas jawaabo waafi ah u helno waxa aan markaas ku dhiirran karnaa heerka akhris ee dadka Soomaalida iyo Joornaalka ugu akhriska badan, si lamid ah waxa aan heli karnaa anaga oo aan baaritaan badan u kicin jawaabta su’aashii ahayd “Maxaa Lagu Qoraa?!” maadaama Soomaalida inta badan ay yihiin dad siyaasadda jecel, inta badan siyaasad ayeey ku hadlaan joornaallada soo baxa marka aan ka shidaal qaadano magaallo madaxda dalka ee Muqdisho, halka tiro badan oo dhallinyaro hadda soo koreyso ay suuq u yeeleen joornaallada ka hadla arrimaha Sports ka ama ciyaaraha hadba sida aad u taqaanno.